Ogaden News Agency (ONA) – Warkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inuu Al-Camuudi luudmo ku yimid Addis-ababa
Warkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inuu Al-Camuudi luudmo ku yimid Addis-ababa
Posted by ONA Admin	/ August 28, 2012
Wararkii ugu dambeeyay ay soo qoraan shabakadaha mucaaradka ee la socda dhaq-dhaqaaqa xukuumadda dhiigyacabka ah ee Adisababa ayay ku sheegeen inuu isbitaal kaga jiray maalqabeenkan magaalada Riyaad oo laga daweynayay kaadi-macaan nooca 2aad ah iyo hammi-xooggan (type 2 diabetes and severe stress). Lama garan karo bay qoreen in naxdintii uu naxay markii loo sheegay inuu dhintay KT Meles zanawi darteed uu u soo dhacay.
Waxay kaloo qoreen shabakadaha in ninkan oo ah dadka madowga ah ninka ugu maalqabeensan in aan laga jeclayn Itobiya iyo gabi ahaan Geeska Afrika isagoo lagu eedeynayo arima ay ka mid yihiin inuu aad ugu ololeeyo dhiigyacab Meles Zanawi oo dad badan oo Itobiyaan ah uu ka raray dhul-beereedkoodii oo isugu geeyay tuulooyin aan lahayn wax nolol ah oy is-dulsaar ku yihiin.
Sidoo kaloo ay ku nceen muslimiinta Geeska Afrika markuu siiyay malyan doolar (Clinton Foundation) 2010 iyadoo bay yidhaahdeen ay kumanaan ku gaajoonayeen dalka Ogadenya iyo Somaliya.
Waxay ku tilmaameen inuu yahay nin boobka hantida shacabka Itobiya la wadaagsada maafiyada TPLF oo dhul beereedkii dadweynaha iyo ceelasha dahabka laga qodo sidaa ku xalaashday.
Wixii ka soo kordha waan la socon doonaa.
Halkan ka akhri
Acw, walaal maamulka ONA halganka Ogadenya kaalin wayn ayaad kaga jirtaan, waxaana aad ugu faraxsanahay sida aad usoo xuluulaynaysaan siyaasadaha qarsoon ee Ithiopia. Waxaan idin leeyahay waa lagu diirsaday qoraaladiina ee horay ugusii socda, soona xaqiijiya gaar ahaan Samoora bakhtigiisa Ogadenya Xorwday.
Talaabo aad u fiican ayaad qaadeen maanta, maadama aad siyaasada ethiopia ee qarsoon soo bandhigaysaan. ISTICMAASHAANA KAARTADA AH CADOWGAAGA CADOWGII WAA SAAXIIBKAA. WAAD I FAHMAYSAAN AYAAN U MALAYNAYAA.